Safiiro Somali Ee Caalamka Oo Is- Badal Lagu Sameeyey
Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay Madaxtooyada Villa Somalia ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu isbedel ku sameeyay qaar ka mid ah safiirada Soomaaliya u fadhiyay dalalka caalamka.
Arintani ayaa la sheegay in ay ka dambeyso isbedel balaaran oo madaxweynuhu uu ku sameynayo xiriirka diblomaasiyadeed Soomaaaliya kala dhexeeya caalamka waxaana safiirada ilaa haatan la badalay kamid noqday: Safiirkii Soomaaliya u fadhiyey Ethiopia Mohamed Cali Nuur Hagi oo sidaan xogta ku helnay loo bedelay safaarada Soomaaliya dalka Djibouti, halka safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Faransiiska Cali Shariif isna loo weeciyay Safaarada Soomaaliya ee Addis ababa.
Safiirada uu isbedelku ku dhacay ayaa la sheegay in uu kamid noqday safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Cumaan danjire Abdirizak Tano kaasoo isna la sheegay in loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar, Iyadoo aan safiirkii isaga kaga horeeyay safaaradan ee xilka laga qaaday an loo dhiibin wax xil safaaradeed ah.
Xogta ayaa intaas kusii dartay in Safiirkii Soomaaliya u fadhiyey dalka Sweden iyo dalalka Scandinavian-ka Cawaale Kulane isna loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee dalka China,
Balse Safaaradaha ay baneeyeen safiiradan la badalay ee dalalka Faransiiska, Sweden, Cummaan iyo safiiradii dalal kale loo wareejiyey ayaan la sheegin iney banaan yihiin oo suurta gal ka dhigaysa in safiiro kale loo magacaabay.
Isbedelkan kooban ee dowlada Soomaaliya ay ku sameysay safiiradii qaar ee caalamka u fadhiyay ayaa imaanaya xili dowlada uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay in badan ku celcelisay in ay wanaajiso xiriirka diblumaasiyadeed ee caalamka kala dhexeeya Soomaaliya, balse waxaa xusid mudan in muddo ka badan sanad ay safiiro la’aan yihiin safaaradaha qaar ee Soomaalida ay ku leedahay caalamka.
Isbeddeladan ayaa la filayaa in si rasmi ah dhowaan loogu shaaciyo warbaahinta.